Rusununguko rwemaoko: Israel inotsiva yakavanzika mahotera nematombo ekuteedzera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Rusununguko rwemaoko: Israel inotsiva yakavanzika mahotera nematombo ekuteedzera
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • Israel Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Rusununguko zvishongo: Zvishandiso zvekutevera zvinotsiva mahwekwe mahotera muIsrael
Vakuru vemuIsrael vanochengetedza kuti mabhandira ekutsvaga achazongozivisa zviremera kana munhu akapfeka akasiya nzvimbo yakasarudzika yekuisa vanhu
Israel inounza COVID-19 yemagetsi yekutevera gadget
VaIsrael vachakwanisa kuzvisarudzira pamba, panzvimbo pehotera dzinotarisirwa nehurumende
Vanotyora mitemo yekuzvitsaura vanogona kubvisiswa faindi inosvika madhora chiuru nemazana mashanu
Vamiriri vemitemo veIsrael vakapasisa bhiri nezuro, vachipa masimba kuzviremera zvemunyika kumanikidza vagari vese vemuIsrael kuti vadzokere munyika kupfeka michina yekuteedzera yedigital - iwo anonzi 'rusununguko mabhandi' - panguva yavo yekumanikidza COVID-19 yekuvharira nguva. Zvino, maIsrael anokwanisa kuzvisarudzira pamba, panzvimbo pehotera dzinotarisirwa nehurumende, chero bedzi vachibvuma kupfeka gadget yekutevera yemagetsi.
The Israeli Knesset wakapasisa mutemo uyu mushure mekunge imwe nhanho yapfuura yaida kuti voga vagare mumahotera anotarisirwa nehurumende apera kutanga mwedzi uno.
Yakataurwa svondo rapfuura, mutemo mutsva unoregerera vana vari pasi pemakore gumi nemana uye unobvumidza vagari kukumbira kuregererwa kubva kukomiti yakakosha. Vaya vanoramba kupfeka rundarira vachazodikanwa kuti vazviparadzanise mune imwe yemahotera ari oga, ayo acharamba achishanda. Vanotyora mitemo yekuzviparadzanisa vanogona kubvisiswa faindi inosvika zviuru zvishanu zvemashekeri eIsrael ($ 14).
Vafambi vanopa zvinyorwa zvinoratidza kuti vapedza kuzadza mushonga wecoronavirus, kana avo vakatobatira uye vakaporeswa kubva kuhurwere, vanogona kusvetuka kugara kwavo vega, chero vakaongorora vasina hutachiona vasati vasvika uye mushure mekuuya munyika.
Iyo bracelet bracelet yakatanga kuziviswa kutanga kwemwedzi uno muchirongwa chekuchaira paBen Gurion Airport kunze kweTel Aviv, uko zvishandiso zana zvakakwenenzverwa kune vanosvika vafambi. Panguva iyoyo, Ordan Trabelsi, CEO weSuperCom, iyo kambani iri kuseri kwesimbi, akati akatarisira kuwedzera chirongwa che "kushandiswa kukuru" muIsrael yose. Sekureva kwe i100 News, zvimwe zviuru gumi zvema bracelets zvakagoverwa, pamwe neumwe zviuru makumi maviri achitarisirwa kunge akagadzirira vhiki rinouya.
Trabelsi nevakuru veIsrael vanochengetedza kuti zvishongo zvekutevera zvinongozivisa zviremera kana munhu akapfeka akasiya nzvimbo yakasarudzika, kazhinji imba yavo, uye voti hazvizo nyatso dhata renzvimbo kana chero rumwe ruzivo. Mukuburitswa kwemapepanhau kutanga kwemwedzi uno, SuperCom yakazvirova dundundu kuti maIsrael akange ataura "zviitiko zvakanaka kwazvo uye zvakanaka" uye "mwero wakakura wekugutsikana" nechishongo.
Pamusoro peiyo bracelet pachayo, iyo inoshanda pane ese ari maviri GPS neBluetooth, vashandisi vanopihwa zvakare chakavakirwa pamadziro, ese ari maviri anogona kupetwa neApple app.
Saizvozvowo zvirongwa zvekutevera zvecoronavirus zvakavhurwa kumwe kunhu kutenderera pasirese, neGoogle neApple vachigadzira maapplication eApplephone kubatsira matracer ekutaurirana gore rapfuura. Iyo tekinoroji inozivisa vashandisi kana vakasangana nemunhu ane hutachiona, asi, kusiyana nechirongwa cheIsrael, kusvika parizvino yasara ichizvipira, ichida kuti vatori vechikamu vapinde.